El Cañuelo Beach, imwe yeakanyanya kunaka paCosta del Sol | Kufamba Nhau
El Cañuelo beach iri, pasina kupokana, imwe yeakanaka kwazvo mu Costa del Sol. Inowanikwa mumataundi eMalaga e Nerja, kunyangwe iri nzvimbo yake yekupedzisira yejecha, yatoganhurana nemuvakidzani Ruwa rweGranada.
Asi zvinoonekera pamhenderekedzo yegungwa iyi inoshamisa nharaunda yayo, iyo yeiyo mawere eMaro-Cerro Gordo. Nekuda kwenzvimbo inoyevedza, haina mapeneti anonyatso kuzivikanwa, kunyangwe iwe uchikwanisa kuswedera padyo nayo nemotokari. Izvi chaizvo zvinopa imwe yemazango ayo makuru: haina kutambura nekuwandisa kweimwe nzvimbo dzine jecha pamhenderekedzo yeMalaga. Kana iwe uchida kuziva El Cañuelo beach zviri nani, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 El Cañuelo beach, yakasarudzika yakasikwa nharaunda
2 El Cañuelo pamhenderekedzo masevhisi
3 Ungasvika sei kuEl Cañuelo beach
4 Chii chaungaone munzvimbo dzakapoteredzwa neEl Cañuelo beach?
4.1 Nerja bako
4.2 Balcony yeEurope
4.3 Hermitages nemachechi
4.4 Civil akitekicha
4.5 Iyo Nhoroondo Museum
El Cañuelo beach, yakasarudzika yakasikwa nharaunda
Zvakare inonzi Cove el Cañuelo, iri pamhenderekedzo ingori chete mazana matatu nemakumi mashanu emamita pakureba ne gumi rakafara. Sezvatakakuudza, mawere makuru eMaro anoikomberedza. Aya ndiwo marefu ayo, mune dzimwe nzvimbo, anosvika mazana maviri nemakumi mashanu emamita kukwirira uye ayo anove ekupedzisira makomo emakomo e makomo eAlhama, Tejeda neAlmijara.
Naizvozvo, iwe unogona zvakare kuwana mamwe akanaka mabhichi munzvimbo ino. Pakati pavo, iyo ye Alberquillas no wave Cantarriján, yekupedzisira yakatemerwa nudism. Kana iwe uine mukana, nakidzwa nenzvimbo yakaoma iyi kubva kugungwa. Navigation inobvumidzwa kusvika chinhambwe chemazana maviri emamita kubva kumahombekombe munzvimbo yemahombekombe uye makumi mashanu mune zvimwe zvikamu.
Nekudaro, kubva kugungwa iwe unonakidzwa nemawere anoyevedza uye iwe zvakare unokwanisa kuona mhando senge iyo genet kana the mbudzi yemumakomo, iyo inoburuka kubva kumakomo ataurwa. Uye iwe uchaonawo kestrels, peregrine falcons y yenyoka-makumbo egungwa.
El Cañuelo beach uye maMaro mawere
El Cañuelo pamhenderekedzo masevhisi
Kunyangwe iri munzvimbo iri kwayo yoga, ino nzvimbo ine jecha inopa Yese masevhisi iwe unofanirwa kunakidzwa nezuva rakanaka pamhenderekedzo. Iine kupaka mota, kunyangwe iri pamusoro pegomo. Sezvo iri nzvimbo yakachengetedzwa, unofanirwa kupinda pamhenderekedzo netsoka. Nekudaro, kune basa rebhazi rinokusiya iwe munzvimbo imwechete yejecha.
Iyo zvakare ine zvimbuzi zveveruzhinji uye mashawa uye michina yehupenyu. Uye zvakare, iwe une nzvimbo mbiri dzepikiniki munzvimbo iyo iwe yaunogona kuchaja ako mabhatiri mushure mekugeza.
Mvura dzayo dzakachena sekristaro uye dzinokutendera iwe kudzidzira scuba diving. Gungwa rayo rinoshamisa zvechokwadi. Mariri, iwe uchaona, semuenzaniso, iyo coral orenji, mhuka iri mungozi. Kana iwe ukawedzera kuzvidzora zvine mwero kune izvi, yako yekugezera mune ino cove ichave inofadza. Kune chikamu chayo, jecha reEl Cañuelo beach dzakachena kunyange iine nzvimbo dzine hurungudo.
Ungasvika sei kuEl Cañuelo beach
Nzira chete yekuenda kumahombekombe ndeiyi mugwagwa. Kuti uzviite kubva kuNerja, unofanirwa kutora iyo N-340 munzira yeAlmuñécar wobva watora iyo kubuda 402. Kune rimwe divi, kana iwe ukafamba munzira itsva inoenda Almería, unofanirwa kubuda pa Horseshoe uye tora yako N-340, asi nenzira ye Málaga.
Uchasvika pamusoro pemawere. Siya mota yako ipapo utore iyo bhazi kudzika kumahombekombe. Mutengo waro wakakomberedza maeuro maviri pamunhu parwendo rwekutenderera.
Chii chaungaone munzvimbo dzakapoteredzwa neEl Cañuelo beach?
Sezvatakatsanangura kare, nzvimbo iyi inowanikwa makiromita gumi nematatu kubva Nerja, rimwe remaguta akanaka kwazvo kuCosta del Sol. Naizvozvo, tinokukurudzira kuti utore mukana wezuva rako kumahombekombe kuti urishanyire.
Imwe maonero eEl Cañuelo beach
Idzo dzimba dzekutanga muNerja dzave kufambiswa makore zviuru makumi mana nezviviri zvakapfuura. Muchokwadi, chimwe chezvakanaka kwazvo ndezvemapako emapako mubako rayo rakakurumbira. Tiri kuzokuratidza zvese zvaungaona mune ino yakanaka Malaga taundi.
Inowanikwa mukati Maro, chaizvo padyo padyo neCañuelo beach. Zviri Asset Yetsika Kufarira uye ine makamuri akati wandei ane anoshamisa stalactites uye stalagmites. Uye zvakare, midziyo yakawanda kubva kunguva yeNeolithic yakawanikwa ipapo.
Asi, pamusoro pezvose, bako rinomiririra mifananidzo izvo zvatakareva kwauri. Muchokwadi, mamwe anomiririra zvisimbiso anogona kunge ari eakare akagadzirwa neHumanity. Pakati pemakamuri anoumba bako reNerja, unogona kushanyira mamwe nemazita anoratidza seCataclysm, iyo Waterfalls kana iyo Ghosts.
Iri zita rakapihwa a maonero iyo inokupa iwe yakasarudzika maonero eguta reMalaga. Zita rake rakakurudzirwa ne Mambo Alfonso XII, uyo akafadzwa nenzvimbo panguva yekushanya kuNerja muna 1885. Asi chakanyanya kuda kuziva chichava chifananidzo chakatsaurirwa Chanquete, wekare mubati wehove kubva munhevedzano 'Verano azul', iri pazasi pechiratidzo chete.
Mune nhaka yechitendero yeguta reMalaga, iyo chechi yemuponesi, Baroque neMudejar kuvaka kubva muzana ramakore rechi XNUMX iro rinogadzira mifananidzo yemadziro ye Francisco Hernández. Panguva imwechete ndeye iyo kereke yezvishamiso, muMaro, kunyangwe bhiri rayo riri nyore. Pakupedzisira, tinokurudzira kuti ushanyire iyo Hermitage yeLas Angustias, zvakare Baroque uye nekapu yakashongedzwa nemifananidzo kubva ku Granada chikoro cheAlonso Cano.
Balcony yeEurope, muNerja
Izvo zvakare zvinonakidza kuti iwe unoshanyira muNerja iyo Ingenio de San Antonio Abad, imwe yemafekitori eshuga ekupedzisira akachengetedzwa pamahombekombe eMalaga. Saizvozvowo iyo Aguila aqueduct, ine nhurikidzwa dzayo ina dzakatenderera mupata weColadilla.
Iyo Nhoroondo Museum
Chekupedzisira, tinokukurudzira kuti uone ino miziyamu, kwaunowana akawanda ezvimedu zvakawanikwa muCueva de Nerja, asiwo ruzivo nezve nhoroondo yazvino kubva mutaundi reMalaga. Iyo iri chinhambwe chipfupi kubva kuBalcón de Europa.
Mukupedzisa, iyo El Cañuelo pamhenderekedzo Inzvimbo diki ine jecha yakavakirwa munzvimbo inoyevedza yechisikigo Kwete kushanyirwa zvakanyanya nekushanyirwa, zuva mairi rinokutendera kuti unakirwe negungwa rakasarudzika uye nemasevhisi ayo mazhinji. Kuti ubatsire rwendo rwako, unogona kushanyira guta rakanaka re Nerja, ine bako rine mukurumbira. Icho hachisi chirongwa chakakura here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Ecotourism » El Cañuelo pamhenderekedzo